कोरोना मुक्त भएको कति समयपछि लगाउने खोप ? विज्ञहरूले दिए यस्तो सुझाव — Imandarmedia.com
कोरोना मुक्त भएको कति समयपछि लगाउने खोप ? विज्ञहरूले दिए यस्तो सुझाव
एजेन्सी । कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीले सङ्क्रमणमुक्त भएको कति समयपछि खोप लगाउने ? ठ्याक्कै यति नै समय भन्ने उत्तर कसैसँग छैन । तर भारतीय विज्ञहरूले तीन महिनापछि खोप लिनु राम्रो हुने जनाएका छन् ।